भोलि फाल्गुन ८ गते शनिबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !
बिहिबार, ०९ बैशाख २०७८
फागुन ०७, २०७७ Dip
मेष – चु,चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ (Aries)
आर्थिक मामला र लेन-देनको मुद्दालाई लेर सचेत रहनुहोला। विवादबाट बच्नुहोला। अन्यथा परिवारको सदस्यसँग झगडा होला। खानपानमा सावधान रहनुहोला। समयमा नै भोजन मिल्नेछ। घरमा तथा कार्यक्षेत्रमा सम्झौता अपनाउनु लाभदायक साबित हुनेछ ।
दिन लाभदायक रहनेछ। शारीरिक र मानसिक रुपले स्वस्थ रहनुहुनेछ तथा पूरा समय ताजगीको अनुभव गर्नुहुनेछ। आफ्नो कलात्मकता र सृजनात्मकताको उपयोग गर्नुहुनेछ। आर्थिक मामलामा योजना बनाउन सक्नुहुनेछ। धन लाभ होला। परिवारसँग समय आनन्दपूर्ण बित्नेछ।
बोलि र व्यवहारमा ध्यान दिनुहोला। तपाईको स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ। विशेष गरेर आँखामा समस्या हुन सक्छ। खर्च हुने दिन रहेको छ। मानसिक चिन्ता बनिरहनेछ। कुनै प्रकारको अकस्मातबाट बच्नुहोला। ईश्वरको भक्ति र आध्यात्मिक कुरामा रुची लिनाले मन केहि शान्ति रहनेछ।
दिन लाभदायक साबित हुनेछ। पेसा र व्यवसायमा अनुकूल परिस्थिति हुनेछ। धन लाभ होला। मित्रबाट विशेह्स लाभ हुनेछ। साथीसँग बसाई वा घुमफिर हुनेछ। प्रिय व्यक्तिसँग राम्रो समय बित्नेछ। आर्थिक योजना सफलतापूर्वक पूरा हुनेछ । विवाहोत्सुक युवक- युवतीको लागि विवाहको योग रहेको छ।
दृढ़ आत्मविश्वास र मनोबलले सबै कार्यलाई सफलतापूर्वक पूरा गर्नुहुनेछ। व्यवसायको क्षेत्रमा द्धिक प्रतिभा रहनेछ। पेसामा पदोन्नतिको योग रहेको छ। उच्च पदाधिकारीलिई आफ्नो कामबाट प्रभावित गर्नुहुनेछ। पिताको तर्फबाट लाभ प्राप्त हुनेछ। सरकारी कामकाजमा सफलता मिल्नेछ। पारिवारिक सुख प्राप्त हुनेछ ।
दिन आनन्ददायक बित्नेछ। आर्थिक लाभ हुनेछ तथा विदेशमा रहने आफन्तबाट समाचार मिल्नेछ। धार्मिक कार्य वा धार्मिक यात्रामा खर्च हुनेछ। विदेश जाने इच्छुक व्यक्तिलाई विदेश जानको लागि अनुकुल अवसर मिल्नेछ।
नयाँ कार्यको सुरुवात नगर्नुहोला। व्यवहारलाई नियन्त्रण राख्नुहोला। साथीको रुपमा लुकेको शत्रुताबाट सावधान रहनुहोला। स्वास्थ्यको पूरा ख्याल राख्नुहोला। गूढ़ विद्यातर्फ आकर्षण बढ्नेछ। धेरै कोसिसपछि मानसिक शान्ति प्राप्त गर्नुहुनेछ।
दैनिक कार्यबाट मुक्त भएर आफ्नो लागि थोरै समय निकाल्नुहोला। मित्रसँग बाहिर जाने कार्यक्रम रहनेछ। उत्तम भोजन मिल्नेछ र नयाँ वस्त्राभूषण प्राप्त हुनेछ। व्यापार र साथीबाट लाभ मिल्नेछ। सार्वजनिक क्षेत्रमा मान- सम्मान बढ्नेछ। विपरीत लिंगीय व्यक्तिप्रति आकर्षण रहनेछ।
धनु -ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे (Sagittarius)
स्वास्थ्य राम्रो रहनेछ। यश कीर्ति तथा आनन्द प्राप्ति हुनेछ। कुटुम्बसँग आनन्दमा समय बिताउनुहुनेछ। कार्यालायमा सहकर्मी तपाईको अधीनस्थ व्यक्तिको पूरा सहयोग प्राप्त हुनेछ । स्त्री मित्रसँग भेट हुनेछ। अधुरो कार्य पूरा हुनेछ।
मानसिक रुपले निकै अशान्त र अस्माज रहनुहुनेछ। कुनै ठोस निर्णय लिन सक्नु हुनेछैन। निराशा अनुभव गर्नुहुनेछ। सन्तानको विषयमा चिन्तित रहनुहुनेछ। घरमा वृद्दको स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ। शारीरिक रुपले अस्वथ्यता अनुभव गर्नुहुनेछ। प्रतिस्पर्धिसँग साथ वाद- विवादमा नउत्रिनुहोला।
अत्यधिक संवेदनशील भएको कारण तपाई मानसिक बेचैनी र अस्वस्थता अनुभव गर्नुहुनेछ। यसकारण जिद्दीपन आउनेछ। सार्वजनिक रूपमा मानहानि नहोस यस कुराको ध्यान राख्नुहोला। सौन्दर्य प्रसाधन , वस्त्र खरिद गर्नुहुनेछ। विद्यार्थिले पढ़ाईमा सफलता पाउनेछ ।
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे,दो, च, चि (Pisces)
महत्त्वपूर्ण निर्णय नलिनुहोला। विचारमा दृढ़ता रहनेछ ,कार्य पुरा हुनेछ। सिर्जनात्मक र कलात्मक शक्ति वृद्धि हुनेछ । साथी वा परिवारसँग कुनै भ्रमणमा जानुहुनेछ। कार्य सफलताले मन आनन्दित गर्नेछ। सार्वजनिक जीवनमा मान- सम्मान रहनेछ।
प्रकाशित : शुक्रबार, फागुन ०७, २०७७२०:४४
आज फागुन ८ देखि १४ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल : यी राशिलाई अत्यन्तै शुभ यो साता